चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पूर्वमन्त्री लेखक दोधारा चाँदनीमा -बिगुल न्यूज
चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पूर्वमन्त्री लेखक दोधारा चाँदनीमा
मङि्सर १३, २०७४ NK-Bigul Media
कञ्चनपुर । नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार तथा पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले दोधारा चाँदनीमा दोस्रो चरणको चुनावी प्रचार कार्यक्रम शुरु गर्नुभएको छ । भीमदत्त नगरपालिकामा पहिलो चरणको घरदैलो पूरा गरी नेता लेखक मंगलबार प्रचारमा निस्कनुभएको हो । लेखकले दुई दिनसम्म दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा प्रचार गर्ने काँग्रेसका क्षेत्रीय प्रवक्ता अफिलाल जोशीले बताउनुभयो ।
लेखकले साविक चाँदनीमा वडा र टोलस्तरीय चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । उहाँले लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका लागि आफूलाई जिताउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
महाकालीमा पक्की पुल र सुख्खा बन्दरगाहलाई चुनावी एजेण्डा बनाउनु भएका लेखकले पुल निर्माण, दोधारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ श्ययाको अस्पताललगायतका एजेण्डा अघि सार्नुभएको छ । प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार बेलबहादुर रानासहित लेखकले मतदातासँग भोट माग्नुभएको छ ।
यसअघि लेखकले महाकाली नगरपालिका सबै वडामा घरदैलो गर्नुभएको थियो । कञ्चनपुर क्षेत्र नं ३ को जितमा दोधारा चाँदनीको मत निर्णायक हुने भएकाले लेखक यहाँका मत तान्न लागि पर्नुभएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन परिणामअनुसार काँग्रेस चाँदनी र एमाले दोधारामा बलियो छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा बेदकोट नगरपालिका–८ सहित भीमदत्तका १९ र महाकाली नगरपालिका १० वडा पर्छन् । क्षेत्र नं ३ मा ९२ हजार मतदाता छन् ।
प्रकाशित : बुधबार, मङि्सर १३, २०७४०९:४९
गगन थापाको निर्वाचन क्षेत्रमा सवै भन्दा धेरै बजेट, कुन शिर्षकमा कति ? बिस्तृतमा
आयोगले दिएको समय सकियो, तर राजपाले हस्ताक्षर बुझाएन
गुल्मीमा तामझाम सहित तीन शिर्ष नेताहरुले गरे मनोनयन दर्ता
ग्रामीण कृषि सडकमा प्रतिकिमी सात रुपैयाँ भाडादर कायम
११ घण्टादेखि बन्द मुग्लिन- नारायणगढ सडक खुल्यो !
यी हुन् याे चुनाबमा ‘रिङआउट’ भएका ९६ जना निवर्तमान सांसद, को–को हुन् (सूची सहित)
मधेश बन्दपछि आजबाट निर्वाचन बिरुद्ध भण्डाफोर अभियान शुरु गर्दै मोर्चा